Sacuudiga iyo xulufadiisa ayaa doonaya in ay magaaladan istaraatiijiga ah ka qabsadaan maleeshiyada Xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda Iran.
Dadka deegaanka magaalada Xudeyda ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay duqeymo xoog leh u geysanayaan dhowr meel oo ka mid ah deegaanada u dhaw garoonka diyaaradaha ee magaalada.
Milatariga Yemen ee kasoo horjeeda Xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Isbaheysiga Carbeed ay sidoo kale duqeeyeen waddada weyn ee isku xiriirisa Xudeyda iyo magaalada caasimadda ah ee Sanca, si ay uga hortagaan in ciidamo gurmad ah ay Xuutiga uga yimaadaan xagga Sanca.
Amina oo ah 22 jir ka mid ah ardayda dhigta jaamacada Xudeyda ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegtay in dadku ay ku jiraan xaalad cabsi ah. Waxay sheegtay in maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha jooga hoose ku socda ay argagax gelinayaan dadka rayidka ah.
Amina waxay kaloo sheegtay in dadku ay ka cararayaan magaalada, balse kuwa saboolka ah aysan awoodin in ay magaalada ka baxaan, sababo dhaqaale.
Qabsashada magaalada Xudeyda oo ay ku taallo dekedda kaliyah ee xoogaga Xuutiga ayaa guul weyn u noqon doonta Isbaheysiga Carabta ee duulaanka ku qaaday Yemen.
Dowladaha Carabta waxay sheegeen in ay qorsheeynayaan in ay xayiraadda ka qaadaan magaalada Xudeyda oo ay in muddo ahba ka go’doomiyeen dhinaca dekadda, iyaga oo ka baqaya in Iran ay halkaasi Xuutiyiinta u marsiiso hub iyo saanad.
Safiirka Dowlada Imaaraadka Carabta u fadhiya dalka Jarmalka Ali al-Ahmed, ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in markab wada 60,000 oo gargaar bani’aaddannimo ah uu hadda diyaar yahay, isla markaana ay geyn doonaan magaalada Xudeyda marka uu dagaalka dhamaado.
Wuxuu sheegay in 72 saacadood ee soo socda ay ku nadiifin doonaan garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Xudeyda, kadib markii ay qabtaan xoogaga isbaheysiga.
Dagaalka Yemen oo billowday sannadki 2015-ki ayaa sababay khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa kale oo uu Yemen ka dhigay halka ugu daran ee ay hadda ka jirto masiibo bani’aadannimo tii ugu xumeyd.
Maleeshiyada Xuutiyiinta ayaa taageera ka hela dowlada Iran. Waxay maamulaan magaalada caasimadda ah ee Sanca. Sacuudiga iyo xulufadiisa Carbeed ayaa doonaya in ay awoodda kusoo celiyaan dowladda rayidka ah ee ay hogaamiyaan madaxda Sunniga, kana hortagaan saameynta dowlada Iran ee Yemen, taas oo si toos ah u taageerta Xuutiga oo hogaankoodu shiico yihiin.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in Ilaa iyo 8.4 milyan oo ruux oo Yemeni ah ay u baahanyihiin gargaar bani’aadannimo oo deg deg ah.